Unyango lwePVC Hollow Hollow |
Unyango lwePVC Hollow
Amaphepha okubopha ophezu kwamandla e-PVC
1. Ukufudumeza ubushushu, ukufakelwa kwesandi
Iminyaka eyi-15 iqinisekisiwe
4. Eyona nto ilungele ukuphahla
Ukufudumeza kobushushu / isandi-ubungqina / ukungangenisi manzi / ukuqina / umgama we-95 Meters Purlin
1.Ukufudumeza kobushushu, ukugquma kwesandi
Iminyaka eyi-2.15 iqinisekisiwe
Ukuxhathisa kwemozulu entle kunye nokuzinza kombala, ubomi obude bufikelela kwiminyaka engama-20 kunye ne-10 iminyaka yokuphela kombala.
Ubuchule bokuhombisa: Yiza nophahla oluhle kakhulu lwe-wavy kunye nesiphumo esibonisa imiba eyahlukeneyo.
Izakhono ezilungileyo zokuthwala umthwalo kunye nokulwa neempembelelo: Uvavanyo libonisa akukho ngozi yenzeka emva kwe-1 kg yebhola yentsimbi yehle kwiimitha ezi-3 kwiphepha.
Ukuchasana nokudumba okugqwesileyo: Isimahla ekutsaleni i-varoius yemichiza yezinto ezinjenge acid, alkali kunye netyuwa.
Ukufudumeza ubushushu: Ukusebenza ngokufudumala kokuhamba kobushushu yi-0.325W / MK, eyi-1/310 yeetayile zodongwe kunye ne-1/5 yetayile yesamente, inokunciphisa iindleko zokupholisa ekhaya okanye eofisini.
Umsebenzi omuhle wokucima umlilo: Ngokwe-GB8624-2006 fireproofing ≥class B
Okwenziweyo kokungenxa kwamanzi: Akukho manzi efunxayo kwaye axovula.
Luhlaza kunye nokusingqongileyo: Musa ukuba ne-asbestos kunye nayo nayiphi na into ephilayo, enokuphinda isebenze.
Kulula ukuyifaka: I-960mm ububanzi esebenzayo kunye nobude obuhlelelweyo buqinisekisa ukufakwa ngokukhawuleza.
Umsebenzi wokuzihlambulula: Ayiluthathi uthuli kwaye kulula kakhulu ukucocwa yimvula.
Izityalo ezikumgangatho ophezulu, iifektri zensimbi, iindawo zokugcina iimpahla, ukuthengisa kwifama, ukufikelela kwimarike, amashiti kunye nezinye izinto eziphezulu zophahla. Ingakumbi kwizityalo zamachiza ezonakalisayo, i-smelter, izityalo ze-ceramic, umzi-mveliso we-soy isosi, izityalo zemichiza, ukuprinta kunye nokudaya indle, umzi-mveliso we-organic solvent, i-acid, ialkali kunye nezinye izityalo ezonakalisayo.
Inkonzo yentliziyo yethu:
1.Qhubeka nokubuza malunga neeyure ezili-12.
Umgangatho ophezulu kakhulu onamaxabiso okhuphiswano.
3.Various isitayile kunye nemibala oyikhethileyo.
Zonke iimpahla ziya kujongwa ngu-QC phambi kokuziswa.
5.Umenzi wentengiso kunye nomthumeli ngaphandle.
6.Dala unikezo lweemveliso ngobungakanani obuzinzileyo kunye nomgangatho othembekileyo
1.Ungumenzi wakho okanye ngumrhwebi?
Ewe, singumenzi wokwenyani, ukuba ufuna enye imveliso ekhethekileyo, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda, sinokwakha ubudlelwane bexesha elide kwishishini.
2. Ndingakwazi uku-oda imveliso ngosayizi okhethekileyo?
Ewe unakho, siya kuvelisa iimveliso ngokweenkcukacha zakho.
3. Kutheni lukhetho lwakho olufanelekileyo?
Sinefektri ethe ngqo kunye neminyaka emininzi yamava okuthumela ngaphandle, kwaye sinikezela ngexabiso elifanelekileyo kunye nemveliso esemgangathweni ye.high, ukuhanjiswa kwexesha elifanelekileyo, kunye nenkonzo elungileyo emva kwentengiso, ke ke ukuba sinesidima kwiibhodi kwaye kubathengi abaninzi banobudlelwane bexesha elide beshishini. .
4. Ithini ixesha lakho lokurhweba?
Intlawulo: T / T 30% ngaphambi kwexesha, ibhalansi ngaphambi kokuba uthunyelwe. Imveliso ekhokelela kwixesha: Kwiintsuku ezisi-7 zomsebenzi emva kweedipozithi ezingama-30 zeedipozithi zokuThumela: iodolo encinci iya kuthunyelwa ngu-Express, i-odolo enkulu iya kuthunyelwa elwandle.
Edlulileyo: Amaphepha oPhahla oluPhezulu lwePolycarbonate
Okulandelayo: Iphepha lePolycarbonate Hollow
Amaphepha amaninzi e-Multiwall Polycarbonate
Amaphepha oPhahla oluPhezulu lwePolycarbonate
Iiphaneli zoLondolozo lweNdalo zePolycarbonate
Iiphaneli zophahla lwePolycarbonate
Amaphepha oPhahla lwePolycarbonate
Amaphepha oPhahla lwePlastiki oNyango
Beka iphepha lophahla
Iphepha lePolorbonate yeCorrug
Amaphepha oPhahla lwePlasitiki